James Rodriguez oo Dhaawac uga Maqnaan Koobka Naadiyada Aduunka – Radio Muqdisho
Tababaraha kooxda Real Madrid Carlo Ancelotti ayaa sheegay in ciyaaryahan James Rodriguez uu dhaawac xalay soo gaaray dartii uga maqnaan doono koobka naadiyada aduunka ee FIFA Club World Cup oo lagu qaban doono dalka Morocco.
Ciyaaryahan James oo 23-jir ah ayaa isaga oo hintinayo xalay ka baxay garoonka Santiago Bernabeu,waxaana uu ka dhaawacmay muruqa lugtiisa midig.
Macalin Ancelotti ayaa sheegay in uu aad uga rajo uga xunyahay in ciyaaryahan Rodriguez uu soo kabsan karo waqtiga uu bilaabanayo koobka.
Kooxda Real Madrid oo lagu naaneyso Los Blancos ayaa ku biireyso lix kooxood oo ka qeyb galaya koobka naadiyada aduunka.
Kooxda Real Madrid ayaa 16-bishan la ciyaari doonto semifinal-ka koobka Naadiyada aduunka kooxdii soo baxdo kooxaha Western Sydney Wanderers iyo Cruz Azul.